permis frantsay ve azo ampiasaina eto amintsika
Date: 24 janvier 2018 - 10:08
Miarahaba antsika rehetra!
Araka io sujet io dia misy namana vazaha ho avy hanao vakansy aty madagasikara dia mitady fiara 4*4 pickup hofaina mandritry ny 15 andro entina mandeha provine tsy mila chauffeur fa hoe izy ihany no mitondra ilay fiara.
Dia manana zo hitondra fiara @ permis-ny avy any ve izy rehefa tonga eto?
Mankasitraka antsika izay mamaly
Re: permis frantsay ve azo ampiasaina eto amintsika
Date: 24 janvier 2018 - 11:07
Bonjour ndaoary >>>>
Permis frantsay dia international , afaka tsara mitondra 4x4 eto izy , fa ny indro keliny dia ilay hoe tsy mitady chauffeur , jereo ny sites maro fa ny ankamaroany dia tsy manaiky ry zareo raha tsy miaraka amin'ny chauffeur raha tsy izany dia tena lafo be ny caution apetraka miaraka amin'ny hofan'ny 4X4 .
Aleo koa hisy chauffeur fa ny conduite eto tsy mitovy amin'ny miconduire automobile any ivelany , aleo chauffeur zatra eto no hitondra , tsy mandeha ny GPS eto , ny carte routière tokana ihany , ny dahalo esty andaniny .
Aleo hisy chauffeur hiconduire azy.
Date: 24 janvier 2018 - 12:47
valiny>> Misaotra anao namaly sy nanome hevitra.
Date: 24 janvier 2018 - 13:06
Lazao ny akama fa diso kajy ilay mieritreritra ny tsy hitondra saofera.
Raha zatra mivahiny any amin’ny tany hafa « tandrefana » ry zareo dia mety izay
Fa raha Madagasikara dia tsy mety .
Na dia manana fahazoan-dalana mivezivezy aza ianao, ahitan’ny polisy irika foana rehefa mila volar y zalahy.
Ny anay farany teo ohatra dia ny valizinay nipetraka teo amin’ny toeran’ny mpandeha no lazain’ilay ranamana fa tsy ara-dalàna hono, fa manao traffic-na bagagy…si si !...dia norahonana fourrières sns…dia nifampijery fotsiny izaho sy ny saofera…dia nisitaka kely izy mitsamy…dia natao sahala amin’ny “ mahazatra”…
Na dia nanana ny rariny aza ny tenako , kely ny fotoana hiarahana amin’ny fianakaviana, ka tsy te handany 2 na 3 andro amin’ny fiara mihitsoka izany satria simba daholo ny praogany efa nomanina…fantatry ny polisy sy ny zandary manakana anao izany…
Ny akamanareo anefa mety tsy hanao toa ahy satria mbola zatra ilay tany “tan-dalàna”. Sarotra aminy ny hieritreritra hoe mila maka volon-tany rehefa any fa tsy hanao be saina !
Ankoatr’izay dia ao matetika koa ny fahasimbàna ara-teknika sy mekanika amin’ny fiara.
Aleo ny saofera ihany no mitantana an’izay …
Date: 24 janvier 2018 - 13:38
Doda>> Misaotra anao nizara témoignage. Sady izy vao zay mihintsy vao ho aty madagasikara ka na izaho koa aza mba gaga nitenenany an'izay hoe tsy mila chauffeur.
Miantehitra be ny fitondrany fiara any izy satria mpanao an'itony Paris Dakar itony, kanefa ny any sy ny aty tsy mitovy na resaka loi na ny route.
Ary hono ho aho taiza ianao no nanao location dia nanao ahoana ny prix, condition sns.... surtout ilay mandeha province, raha ny eritreretiny zao dia hoe Diego.
Date: 24 janvier 2018 - 15:36
An’ny havana akaiky ny fiara dia tsy nanofa fa nindrana fotsiny !
Fa mila “autorisation” ihany na dia izany aza, miaraka amin'izay "trajet" rehetra tiana handehanana , dia tsy maintsy voasoratra ao daholo ny anaran’ny olona handeha ilay fiara…
Izany no anisan’ny zavatra fantatry ny mpitondra vahiny daholo , fa tsy fantatry ny akamanao.
Date: 24 janvier 2018 - 18:24
Ireo mpampanofa lehibe ireo aloha (Hertz, Avis, Budget) dia mampanofa fiara "sans chauffeur" daholo e, bedabe ny vazaha no manofa fiara sans chauffeur eto madagasikara fa diso be ny fihevitsika hoe vitsy.
Ny fiara an'ireo dia vaovao daholo, satria fiara an'i Madauto na Sicam ihany ny an'ireo, ary misy assurances tout risques daholo koa
Diso ilay hoe GPS tsy mandeha eto Mada fa raha fiara sortie concessionnaire ka misy option GPS dia mandeha tsara mihitsy ny GPS satria cartographie ocean indien no ao ka tafiditra ao tsara mihitsy ny cartographie Madagasikara.
Fa raha tsisy GPS ny fiara dia ny application gratuit sady offline tsy mila connexion toy ny MAPS.ME dia mandeha tsara aty madagasikara.
Ka raha ny hevitro raha te hanofa fiara sans chauffeur ny namanareo vazaha, dia amin'ireo compangie lehibe toy ny Hertz na Avis ireo no mandeha. Raha eto MAdagasikara moa ianao, tonga dia manatona mivantana ny Sicam na Madauto.
Par: lafo be
Date: 24 janvier 2018 - 20:00
sash ====> Arakilay lazain'ny valiny ery ambony misy mampanofa sans chauffeur fa lafo be ny caution , raha misy simba , na kika , na misy panne na very dia mbola misy vola be aloa aankotran'ny caution.
Misy particulier mampanofa sans chauffeur koa fa dia lafo be ny caution.
Date: 25 janvier 2018 - 13:38
lafo be > tsy haiko hoe ohatrinona le lafo be fa 4 000 000 AR aloha ilay izy
averina manontolo io raha tsisy maninona ny fiara @ famerenanan azy
ny prix location indray raha t@ 2017 dia 300 000 Ar latsaka kely eo, zany hoe manodidina ny 70 eur eo ho eo ny Pajero vaovao be
Date: 25 janvier 2018 - 15:15
cava ihany zany 70 € zany. ilay 20 millon FMG na 1000 € ny causion hoatrn mampanofa fiara andafy koa izany
Date: 06 février 2018 - 16:04
Vitsy iany ny olona anaiky anzany oe tsy mila chauffeur zany an! Fa misy iany fa caution alou dé lafo e!
Date: 25 février 2018 - 14:51
Hafa mihitsy ny permis international sy ny permis français noho izany tsy permis international ny permis français.
Permis français ny ahy, voasava papier ary tsy mahazo mitondra fiara @ permis français aty Mada. Izay ny lalana vaovao